Ogaysiis dhamaan dadka isticmaala Somali net.
SomaliNet Forum (Archive): RA'YIGA DADWEYNAHA - Your Opinion: Somalia: Archive (Before Nov. 8, 2000): Ogaysiis dhamaan dadka isticmaala Somali net.
<!-Post: 121129-!><!-Time: 973199665-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Anonymous<!-/Name-!> Thursday, November 02, 2000 - 11:14 am
<!-Text-!> Waxaa jira dad iska dhiga qabiilo aysan ahayn si ay isugu diraan dadka Somaaliyeed dadkaasi waad wada garan kartaan qoloda ay yihiin, waa qoloda doonaysa goosashada oo aaminsan haddi Somalida kale ay heshiin waayaan in la aqoonsandoono. Run ahaantii waa caqli aad iyo aad u yar in qof muslim sheegta uu sidaas u fakaro. <!-/Text-!>
<!-/Post: 121129-!> <!-Post: 121715-!><!-Time: 973278534-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Anonymous<!-/Name-!> Friday, November 03, 2000 - 09:08 am
<!-Text-!> Beentaa weeye arrintaas. Haddii aad akhrido maqaalada halkan lagu soo qoro, waxa intaas la weerarayaa waa kuwa doonaya inay goostaan, haddii aad u jeedo Somaliland. Markaas, dadkii la weerarayay, intii aad taageeri lahayd, ayaad iyagii sii dulmiday. Dadka run ahaantii qabiillo kale iska dhigayaa, waa kuwa jecel in Somaliland khalkhal ka dhex dhasho. Iyagoo aaminsan, haddii uu dhaco dagaallo ay dadka reer Somaliland ka hadhi doonaan qadiyaddooda. Taasina ilaahay idankiis ma dhici doonto.
Arrinta goosashada iyo isu darkana, waxay ku xidhan tahay rabidda dadka ee wax Somalinet wax lagu qoray ay saameyn ku yeelan karto ma ah.
Teeda kale, dadka reer Somaliland, waxay mar kasta idiin rajeyaan nabad, barwaaqo iyo dawladnimo inuu idin siiyo, iyaguna tooda ay xijistaan.
Waa idinka kuwa la soo taagan dawlad ma tihidin. Anagu waxaanu ku leenahay dawlad ayaad tahay barakeysto taada, laakiin aniga dawlad nooma tihid.
Ma kala fahantahay faraqa noo dhexeeya. Anagu wax ayaanu kula rabnaa. Adinkuna wax ayaa noo diidantihiin.
Kuwa weerarka hayaa waa idinka. Anaguna waa nagu difaaca..... <!-/Text-!>
<!-/Post: 121715-!> <!-Post: 122433-!><!-Time: 973385793-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>nuuraani<!-/Name-!> Saturday, November 04, 2000 - 02:56 pm
<!-Text-!> dowladaada waala diiday ma jirto ee waxaa jira tan c/qaadin ee waxaan ku weydiiyay ma qayildan tahay mise waad waalatay aduunka sharci ayaa socda ee iska hadal ma socdo UNta c/qaasim ayey aqbaleen cigaalna waa mooryan dadka heysta ee caqli iyo sharci ha ku haddlo, qabiilna dowlad ma noqdo garxajis waa ku diiday dhulbahante waa ku diiday warsangeli waaku diiday yaa soomaalilad ah??? xishoo hadii aad fayoowdahay. <!-/Text-!>
<!-/Post: 122433-!> <!-End-!>